January 2018 – Page2– Thadin Media
ဓားပြ၀င်တိုက်နေတာကို FACEBOOK မှာ LIVE လွှင့်ပြတဲ့ထူးထူးခြားခြား ဘဏ်ဓားပြ
January 21, 2018 aInternational News
[Zawgyi] ထူးဆန်းတဲ့ ဓားပြတစ်ယောက်ဟာ မီယာမီမှာရှိတဲ့ Navy Federal Credit Union ဘဏ်ကို ဓားပြ၀င်တိုက်တာကို Facebook ပေါ်မှာ တိုက်ရိုက် လွှင့်တင်ခဲ့ပြီး၊ ရဲစခန်းကိုလည်း ကိုယ်တိုင် အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ဗွီဒီယိုကို ရိုက်ကူးခဲ့သူကတော့ Uber ကားဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး၊ သူ့ကို ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းနဲ့အတူ ခြိမ်းခြောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ ယူဆရပါတယ်။ အဲဒီနောက် ရသမျှ ပိုက်ဆံတွေကို ခရီးသွားတွေနဲ့ လမ်းသွားလမ်းလာတွေကို ဝေငှခဲ့ပါတယ်။ မျက်မြင်သက်သေတစ် ယောက်ရဲ့ အဆိုအရ ဒေါ်လာ 100 လောက်အထိ ရသွားတဲ့သူတွေလည်း ရှိတယ်လို့…
ဘင်္ဂလီ စစ်သွေးကြွတို့၏ ခြေလှမ်းသစ်
January 21, 2018 aPloitical
[Zawgyi] နှစ်သစ်၏ အစပိုင်းရက်များအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ရိုဟင်ဂျာ ခေါ် ဘင်္ဂလီ စစ်သွေးကြွတို့၏ ၃ လကြာ ရပ်နားနေခဲ့ပြီးမှ ပြန်လည်စတင်ခဲ့သော ပထမဆုံး စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုက ယခုနှစ်တွင် ပဋိပက္ခက မည်သည့် လားရာအတိုင်း ဦးတည်မည် ဆိုသည်ကို လှစ်ဟပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုတိုက်ခိုက်မှုက ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဘာသာရေးကွဲပြားချက် နက်ရှိုင်းစွာ ရှိနေပြီး ဒုက္ခသည် ၆၅၀၀၀၀ ကျော် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနောက် တင်းမာမှုတို့က ဆူပွက်နေပြီး ဖြစ်သည့် နိုင်ငံတကာနယ်စပ်တခု တည်ငြိမ်ရေး…
တောထဲ မှာ သံဃာ မပါ ဘူး ဒါေ ပမည့် အမိန့်ပြန်တမ်းနဲ့ သူ့ဝဋ်ညဉ်ဘယ်ကိုသွားမလဲ
January 20, 2018 aPloitical
[Zawgyi] တောထဲမှာ သံဃာမပါဘူး ဒါပေမည့် အမိန့်ပြန်တမ်းနဲ့ သူ့ဝဋ်ညဉ်ဘယ်ကိုသွားမလဲ မိသားစုစီလား မိဘစီလား ဘယ်မဟုတ်မလဲ သူ့တိုက်ဖေါ်တိုက်ဖက် ရဲသောရဲဘက်တွေနဲ့အတု တိုက်ပွဲတွေဝင်နေဆဲပါ အောင်ပွဲရမှတပ်ကိုပြန်မယ် ဒါသူ့စိတ်တိုင်းပြည်ချစ်တဲ့စိတ် သေသော်မှလည်းစိတ်မဖြောင့်ပါ ငါတို့တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းပါစေ ငါတို့အရိုးမြန်မာပြည်တဝှမ်း ခြံစည်းရိုးကာဝဋ်ညဉ်ဘဝ ငါတို့စောင့်ရှောက်နေ ရဲဘော်တို့တိုက်ကြစို့ [Unicode] တောထဲမှာ သံဃာမပါဘူး ဒါပမေညျ့ အမိနျ့ပွနျတမျးနဲ့ သူ့ဝဋျညဉျဘယျကိုသှားမလဲ မိသားစုစီလား မိဘစီလား ဘယျမဟုတျမလဲ သူ့တိုကျဖျေါတိုကျဖကျ ရဲသောရဲဘကျတှနေဲ့အတု တိုကျပှဲတှဝေငျနဆေဲပါ အောငျပှဲရမှတပျကိုပွနျမယျ ဒါသူ့စိတျတိုငျးပွညျခဈြတဲ့စိတျ သသေျောမှလညျးစိတျမဖွောငျ့ပါ ငါတို့တိုငျးပွညျငွိမျးခမျြးပါစေ ငါတို့အရိုးမွနျမာပွညျတဝှမျး ခွံစညျးရိုးကာဝဋျညဉျဘဝ ငါတို့စောငျ့ရှောကျနေ ရဲဘျောတို့တိုကျကွစို့
မ​နေ့က​ ​တော့ ​… တနိုင်း​ဒေသနဲ့ အင်​ထန်​စွပ်​ဂွင်​ထဲမှာ… KIA,စု​ပေါင်း ​သူပုန်​တချို့ကို
[Zawgyi] မင်္ဂလာပါ.. . ​မြောက်​ဦး Case,​တွေဖက်​​ ရောက်​​နေလို့… ရှမ်း​မြောက်​အ​ရေး လွှတ်​ထားသလိုဖြစ်​​နေမိတယ်​ဗျာ… မ​နေ့က​​တော့ ​… တနိုင်း​ဒေသနဲ့ အင်​ထန်​စွပ်​ဂွင်​ထဲမှာ… KIA,စု​ပေါင်း ​သူပုန်​တချို့နဲ့… နံမည်​ကြီး တပ်​မ တခုဖြစ်​တဲ့ …. မြင်းခွာ တပ်​မ တပ်​​တွေ… ပွဲကြီးနှစ်​ပွဲ… ​လေးနာရီခြားပြီး… ထိ​တွေ့မှု​တွေ ရယူထားခဲ့တာပါ… ပထမပွဲက​… တနိင်းဂွင်​ထဲက တပ်​မဟာ၂ အမည်​​ပေါက်​… ​ခွေးအ တစ်​အုပ်​ကို… မနက်​ ၁၀နာရီ​ကျော်​​လောက်​က… နမ့်​ဖြတ်​​ချောင်းအထက်​(ယုဇန ကုမ္မဏီ .၃၃)လမ်းနားမှာ… အငိုက်​ဖမ်း ​ချောင်​ပိတ်​ သုတ်​သင်​နိုင်​ခဲ့ပြီး… ဒုတိယပွဲက​တော့……
TNLA နှင့် SSA တို့ နမ့် ဆန် ကိုက်တိုင်ရွာ တွင် ရင်​ဆိုင်​တိုက်​ပွဲ ဖြစ်
[Zawgyi] “တွင်း​အောင်း ပလူ”(Tnla)အဖွဲ့နဲ့…. SSA(လွိုင်​တိုင်းလျံ)အဖွဲ့ တို့… နမ့်​ဆန်​မြို့နယ်​… ကိုက်​တိုင်​ရွာ​.အောက်​ဖက်​မှာ… မ​နေ့က… မနက်​၉နာရီ​ကျော်​​လောက်​နဲ့… ည​နေ ၃နာရီ​ကျော်​​လောက်​မှာ နှစ်​ကြိမ်​တိတိ… တနာရီ​ခွဲ​လောက်​ အပြန်​အလှန်​ ပစ်​ခတ်​ကြရင်း. .. ရင်​ဆိုင်​တိုက်​ပွဲ​တွေ ဖြစ်​ခဲ့ကြတာပါ … ကိုက်​တိုင်​ ရွာခံ​တွေ​ပြောစကားအရ… နှစ်​ဖက်​စလုံး ​သေတဲ့သူ / ဒါဏ်​ရာရတဲ့သူ… ဆယ်​ဂဏန်း အထက်​ရှိနိုင်​ပြီး… ဝါးထမ်းစဉ်​​တွေလုပ်​ကာ… ​မှောင်​တဲ့အထိ… မီးထုပ်​​တွေနဲ့ ​တောတိုး​ သွားကြတယ်​လို့… ဆိုပါတယ်​… ရှင်းရှင်း​ပြောရရင်​… အဲ့ဒီဂွင်​ထဲမှာ တပ်​မ​တော်​စစ်​​ကြောင်း​တွေလည်း… လက်​ယှက်​ထိုး ပါတ်​​မွှေ​နေတာမို့… သုံးပွင့်​ဆိုင်​ ဇာတ်​လမ်း​လေး​…
ဖရဲသီးသည်လေး ကို ယနေ့သဂြိုလ်
[Zawgyi] လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်အတွင်းက လူမှုကွန်ရက်ပေါ် ပြန့်နှံခဲ့တဲ့ ဖရဲသီးရောင်းသူ သန်လျင်မြို့ အေးမေတ္တာရပ်ကွက်နေ မောင်မျိုးမင်းဦး(ခ) ၀က်ကြီး ကို သန်လျင် အမိုးနီသုဿန် မှာဒီကနေ့ နေ့လည်ပိုင်းကသဂြိုလ်လိုက်ပါပြီ။ သူဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြိုးဆွဲချပြီးသတ်သေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ သေဆုံးချိန်မှာအသက်၂၂နှစ် အရွယ်သာရှိသေးပြီး၊မွေးရာပါ သူငယ်နာအကြောတင်း ဝေဒနာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့ သူ့ရဲ့ ဖခင်ကပြောပါတယ်။ အေးမေတ္တာရပ်ကွက်မှ ရာအိမ်မှူး ဦးမြင့်ကျော်က “ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာ သူ ဖရဲသီးစိတ်တွေပြုတ်ကျတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေတက်လာတယ်။ ဟိုကပြောဒီကပြောနဲ့ ဆိုတော့ ဖေ့ဘုတ်အကောင့်ကို ဖွင့်ခိုင်းပြီး တွေ့ရာလူကို စာဖတ်ခိုင်းတယ်။ သူကစာမတတ်ဘူး၊ ဖတ်တတ်တဲ့သူက…
မိုင်းခေါင် ဒုက္ခသည်စခန်းမှ ရွာသား ၃ ဦး အသတ်ခံရမှုဖြင့် တပ်မတော်သား ၆ ဦး ကုို တပ် မှ ရာသက်ပန်ထုတ်ပယ် ထောင် ဒဏ် ၁၀ နှစ် အမိန့်ချမှတ်
January 20, 2018 January 20, 2018 aPloitical
[Zawgyi] ကချင်ပြည်နယ် မန်စီမြို့နယ် မိုင်းခေါင်ဒုက္ခသည်စခန်းမှ ရွာသား ၃ ဦး အသတ်ခံရမှုဖြင့် တပ်မတော်သား ခမရ ၃၁၉ စခန်းမှ တပ်မတော်သား ၆ ဦးကုို ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့က တပ်မတော် စစ်ခုံရုံးတွင် ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ် အမိန့်ချမှတ်လုိုက်သည်ဟု သိရသည်။မန်စီမြို့ အခြေစုိုက် ခမရ ၃၁၉ စခန်းမှ တပ်ရင်းမှူး ဇေယျဦး၊ စစ်ကြောင်းမှူး ဗုိုလ်ကြီးလွမ်းမုိုးအောင်၊ ဗုိုလ်ကြီး ကျော်ဇင်မြင့်၊ ဗိုလ်ကြီး မျိုးသူဇော်၊ ဒုတပ်ကြပ် ရှိင်းထက်အောင်နှင့် တပ်သားဖြိုးကုိုတုို့…
မြောက်ကိုရီးယား မှ အမေရိကန်နိုင်ငံကို နျူကလီးယား လက်နက်ဖြင့် အချိန်မရွေး ပစ်နိုင်ခြွေနိုင်
January 19, 2018 aInternational News
[Zawgyi] ချက်ချင်းလက်ငင်းကိုပစ်ချနုိင်တဲ့အင်အားမျိုး မြောက်ကိုရီးယားမှာ အမှန်တကယ်ရှိနေပါတယ်။ “ကျွန်တော်တွေးနေမိသမျှကတော့ ကျွန်တော်ဟာ အရူးတစ်ကောင်ရဲ့လက်ထဲမှာအချိန်မရွေးသေသွားနိုင်ပြီးမသေအောင်လည်းဘယ်လိုမှတန်ပြန်ကာကွယ်မှုမျိုးမပြုလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာပါပဲ” ဒီစကားတွေကိုပြောခဲ့သူကတော့ အမေရိကန်ရေတပ်က သင်္ဘောသားတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစကားဟာမှန်ကောင်းမှန်နိုင်တယ်ဆိုတာထက်ကိုပိုပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာမြောက်ကိုရီးယားမှာ တောင်ကိုရီးယားတရုတ်နဲ့အမေရိကန်အရှေ့ပိုင်းဒေသတွေကိုအမှုန့်အဖြစ်ပြောင်းပစ်နိုင်တဲ့ နည်းပညာရောလက်နက်ကိရိယာတွေပါအလုံအလောက်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသက်သေပြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားဟာ အမေရိကန်ကိုကြည့်မရတာနဲ့အချိန်မရွေးပစ်ချနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးသုတေသီတွေက ယူဆထားကြပါတယ်။ အချို့သောနိုင်ငံရေးလေ့လာသူတွေကတော့ မြောက်ကိုရီးယားမှာနျူကလီးယားလက်နက်တွေ အခု 40 ကျော်လောက်ရှိနေတယ်လို့ ခန့်မှန်းရပေမယ့် လက်နက်တွေအကုန်လုံးဟာမြို့တော်နဲ့နယ်စပ်တွေမှာတည်ရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ အများစုကို မြေအောက်ပိုက်လိုင်းတွေလိုလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာတွေမှာ မြှပ်နှံထားပါလိမ့်မယ်။တကယ်လို့ အမေရိကန်က တရစပ်တိုက်စစ်ဆင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲဒီ့လက်နက်တွေအကုန်လုံးကိုတပ်ဆင်အသုံးပြုဖို့ရာ အချိန်မီပြုလုပ်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမှာဖြစ်ပေမယ့်လည်းအဲဒီ့အခါမှာမြောက်ကိုရီးယားက သူ့ဆီမှာရှိသမျှကူးစက်ပိုးမွှားတွေပလိပ်ကပ်ရောဂါတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကမ္ဘာဖျက်ပိုးမွှားလက်နက်တွေနဲ့ခုခံတာမျိုးတွေလုပ်တော့မှာပါလို့ တွက်ဆထားကြပါတယ်။ ဘယ်ဘက်ကမှအရေးသာနေတာတော့မဟုတ်ဘူးပြောရပါမယ်။ [Unicode] ခကျြခငျြးလကျငငျးကိုပဈခနြိုငျတဲ့အငျအားမြိုး မွောကျကိုရီးယားမှာ အမှနျတကယျရှိနပေါတယျ။ “ကြှနျတျောတှေးနမေိသမြှကတော့ ကြှနျတျောဟာ အရူးတဈကောငျရဲ့လကျထဲမှာအခြိနျမရှေးသသှေားနိုငျပွီးမသအေောငျလညျးဘယျလိုမှတနျပွနျကာကှယျမှုမြိုးမပွုလုပျနိုငျဘူးဆိုတာပါပဲ” ဒီစကားတှကေိုပွောခဲ့သူကတော့…